Fursadaha Shaqada - Xarunta Caafimaadka ee Lancaster Fursadaha Shaqada - Xarunta Caafimaadka ee Lancaster
Ku qiimee qiyamkaaga shaqsiyeed sidii aan ula socon lahayn Himilada, aragtida, iyo nooca daryeel?
Hadday sidaas tahay, ku biir kooxdayada! Ka raadi dhammaan mawqifyadeenna furan ~
Xarunta Caafimaadka ee Lancaster hadafkeenu waa inaan gaarno caddaalad iyada oo loo marayo daryeel caafimaad oo soo dhaweynaya, xoojinaya oo gacan ka geysta kor u qaadista bulshada oo dhan.
Qof kastaa wuxuu heli karaa daryeelka uu u baahan yahay si uu u helo oo caafimaad ugu helo. Qoys walba, saaxiibkiis iyo deriskiisaba waxay si buuxda ugu biiriyaan kalsoonida bulshadayada.
Marxalad kasta oo nolosha ah waxaan ku bixinaa daryeel asaasi ah, daryeelka ilkaha, caafimaadka dabeecadda iyo adeegyada bulshada iyada oo loo marayo xiriir soo dhaweynaya, xoojiya oo ka caawiya bulshadeena inay kor u kacaan. Waxaan aaminsanahay caafimaadka oo dhan. Taas macnaheedu waa inaan wax ka qabanno oo aan daaweynno cudurrada laakiin sidoo kale waa muhiim, waxaan ka shaqeynaa sababaha keena, cilladaha bulshada ee ay tahay in wax laga qabto si loo gaadho sinaanta dhabta ah.
Xarunta Caafimaadka Lancaster waa 501 (c) 3 Ururka Faa'iidada Bulshada oo leh iskaa wax u qabso Gudiga Agaasimayaasha bulshada. 51% Gudigayagu waa bukaanka Xarunta Caafimaadka Lancaster. Natiijadu waa isku darka hoggaamiyeyaasha bulshada oo fahmaya oo qaata nolosha adag iyo awoodaha gaarka ah, oo si adag u shaqeeya si loo jabiyo dhammaan caqabadaha daryeelka.
Macaashka kale ee shaqaalaha waxaa ka mid ah:
Xulashada laba qorshe caafimaad
Daboolista ilkaha iyo aragga
Xisaabaadka Kordhinta / Xisaabaadka Caafimaadka
Loo shaqeeyuhu wuxuu bixiyay caymiska nolosha
403 (b) iyo qorshayaasha howlgabnimada Roth
Wakhti fasax ah iyo fasax bixin
»Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waa Loo shaqeeye Fursad Loo Wada Siman Yahay.